I-Histology Inkcazo kunye nesingeniso
Inkcazo kunye nesingeniso
I-Histology ichazwa njengoluphando lwezenzululwazi lwe-microscopic structure (microanatomy) yeeseli kunye nezicubu. Igama elithi "histology" livela kumazwi esiGrike athi "histos," okuthetha izicubu okanye iikholam, kunye ne "logia," oku kuthetha ukufundisisa . Igama elithi "histology" laqala ukuvela kwincwadi ye-1819 ebhalwe ngu-anatomist waseJalimane kunye nomzimba wezobuchwephezi uKarl Meyer, ukulandelela iingcambu zaso kwiminyaka ye-17 yeengqungquthela zophando zezinto eziphilayo ezenziwa ngumgqirha waseNtaliyane uMarcello Malpighi.
Indlela i-Histology isebenza ngayo
Iindibano ze-histology zijolise ekulungiseleleni i-hertology slides, ngokuxhomekeke ekusebenzeni kwangaphambili kwe-anatomy ne-physiology . Iindlela zokukhanya kunye ne- electron microscopy ziqhele ukufundiswa ngokwahlukileyo.
Amanyathelo amahlanu okulungiselela ama-slides ye-histology yile:
Amaseli kunye nezicubu kufuneka zizinze ukukhusela ukubola nokuhlaziywa. Ukucwangciswa kuyadingeka ukukhusela ukuguqulwa ngokugqithisileyo kwezicubu xa zifakiwe. Ukufakela kubandakanya ukubeka isampula ngaphakathi kwezinto ezixhasayo (umzekelo, iparafini okanye iplastiki) ngoko ke iisampula ezincinci zinokunqunyulwa zibe ngamacandelo amancinci, afanelekile kumatshini. Ukwahlula kwenziwa ngokusetyenziswa ngamacandelo akhethekileyo abizwa ngokuba yi-microtomes okanye i-ultramicrotomes. Amacandelo afakwa kwi-microscope slides kunye nebala. Iiprothotholi ezihlukahlukeneyo zikhoyo, ezikhethiweyo ukuphucula ukubonakala kweendlela ezithile zezakhiwo.
I-stain eqhelekileyo yintlangano ye-hematoxylin kunye ne-eosin (i-H & E stain).
I-Hematoxylin ibala lamaselula e-blue nuclei, ngelixa i-eosin ibala le-cytoplasm pink. Imifanekiso ye-H & E isilayidi inokuthi ibe kwiimithunzi zepinki kunye ne-bluhlaza. I-Toluidine iibhakabhaka ezihlaza okwesibhakabhaka i-nucleus kunye ne-cytoplasm eluhlaza okwesibhakabhaka, kodwa iisisiti zeembombo ezibomvu Imibala yebala likaWright ibomvu yegazi elibomvu / eluhlaza okomvu, ngelixa ijikeleza iiseli ezimhlophe zegazi kunye neeplatelets eminye imibala.
I-Hematoxylin kunye ne-eosin zivelisa i- stain permanent , ngoko i-slides ezenziwe ngokusebenzisa le nhlanganisela inokugcinwa ukuze ihlolwe kamva. Ezinye izidanga ze-hertology zisesigxina, ngoko-photomicrography iyimfuneko ukuze kugcinwe idatha. Ininzi yamathambo e-trichrome ahlukeneyo , apho umxube omnye uveza imibala emininzi. Ngokomzekelo, i-Malloy's trichrome imibala ye-cytoplasm ebomvu ebomvu, i-nucleus ne-muscle ebomvu, iiselom zegazi ezibomvu kunye ne-keratin orange, i-cartilage eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nethambo eliluhlaza.
Amacandelo amabini ahlukeneyo amathishu avelisa izicubu zezityalo kunye nezicubu zezilwanyana.
Ukutshala i-hertology ngokuqhelekileyo kuthiwa "isityalo se-anatomy" ukuphepha ukudideka. Iintlobo eziphambili zezicubu zityalo zi:
Kubantu nakwezinye izilwanyana, zonke izicubu zinokuthi zihlelwe njengenye yeqela ezine:
Amacandelwana ezi ntlobo zimbalwa ziquka i-epithelium, i-endothelium, i-mesothelium, i-mesenchyme, iiseli zegciwane, kunye nama-stem cells.
I-Histology ingasetyenziselwa ukufundela izakhiwo kwii-microorganisms, fungi, kunye ne-algae.
Umntu olungiselela izicubu zokucoca, ukuwasika, ukuwaphazamisa, kunye nemifanekiso kuthiwa yi- physicist .
Izazi zeengcali zisebenza kwiilabhu kwaye zinezakhono ezicokisekileyo, ezisetyenziselwa ukuchonga indlela efanelekileyo yokunqumla isampuli, indlela yokucoca amanqaku ukuze wenze izakhiwo ezibalulekileyo zibonakala, kunye nendlela yokubonisa izitilayi usebenzisa i-microscopy. Abasebenzi beLebhu kwi-laboratory ye-hertology baquka izazinzulu zendalo, ochwepheshe bezonyango, ochwepheshe be-hertology (HT) kunye ne-histology technology (HTL).
Iilayidi kunye nemifanekiso eveliswa ngabadlali bezilwanyana zihlolwe ngabagqirha bezobugqirha ababizwa ngokuba yi-pathologists. Iipathologists zijolise ekuboneni iiseli ezingaqhelekanga kunye nezicubu. I-pathologist inokufumanisa iziganeko nezifo ezininzi, kubandakanya umdlavuza kunye nokusuleleka kwintsholongwane, ngoko-ke abanye oogqirha, oogqirha bezilwanyana, kunye neencothakethi banokucwangcisa izicwangciso zonyango okanye baqaphele ukuba ukungaqhelekanga kwabangelwa ukufa.
I-Histopathologists yiingcali ezifunda izicubu ezigulayo.
Umsebenzi kwiindawo zakhe zempilo ufuna i-degree degree okanye ugqirha. Inzululwazi ezininzi kule ngqeqesho zinamazinga athile.
I-Histology ibalulekile kwimfundo yesayensi, isayensi yesetyenziswe, kunye neyeza.
I-Histology ifundiswa kubabiloji, abafundi bezonyango, nabafundi bezilwanyana kuba kubancedisa ukuba baqonde kwaye baqaphele iintlobo ezahlukeneyo zezicubu. Ngaloo ndlela, i-hertology ibhalela isithuba phakathi kwe-anatomy ne-physiology ngokubonisa oko kwenzekayo kwiisishu kwizinga leselula.
Abavubukuli basebenzisa i-histology ukuze bafunde izinto eziphilayo ezifunyenwe kwiindawo zezinto zakudala. Amathambo kunye namazinyo kunokwenzeka ukuba anikezele idatha. Iipaleontologists ziyakwazi ukufumana izinto ezincedo ezivela kwizinto ezilondolozwe kwi-orber in frown.
I-Histology isetyenziselwa ukuxilonga izifo kubantu, kwizilwanyana nakwizityalo nokuhlalutya imiphumo yonyango.
I-Histology isetyenziswe ngethuba lophando kunye nophando lophando lokunceda ukuqonda ukufa okungachazi kakuhle. Kwezinye iimeko, isizathu sokufa singabonakala kwi-microscopic examination tissue. Kwezinye iimeko, i-microanatomy ingabonakalisa inkcazo malunga nokusingqongileyo emva kokufa.
Ukusebenza kwiKhaya kwiSayensi
Ukwahlukana phakathi kwezinto eziphilayo kunye neenorganic
ILizwi loSuku - sekai
IMfazwe yaseMexico naseMerika: iMfazwe yaseChurubusco
Umlando weMbali yeeesile (Equus asinus)
Izona zokuThengisa izinto eziPhambili kwiLondon
Imfazwe Yeminyaka Emashumi Amathathu: Imfazwe yaseLutzen
Ngaba i-Sparklers ikhuselekile kwiCakes?
Uludwe lweeShakespearean Sonnet
Inani leTshintsho lokuSebenzayo lokuSebenza kunye neZisombululo
I-AP US Information Review History
Iiphathi zeehadi kunye namaPhepha
Uvavanyo Lokuphulaphula - Ngaba Ungumphulaphuli Olungileyo?
Ukuqonda iNkolo yeThelema